रोचक Archives - काभ्रे पोष्ट
मौसम परिवर्तन संगै बजारमा बिभिन्न किसिमका फलफूलहरु देख्न सकिन्छ त्यसैले गर्मी मौसममा काँक्रो सबैको घरघरमा पुगेकै हुन्छ र प्राय सबै ब्यक्तिहरुलाई मन पर्छ । काँक्रोको सेवनले शारीरलाई निकै फाईदा गर्छ । यसमा ‘इरेप्सिन’ नामक एम्जाइम हुन्छ जुन प्रोटिन पचाउनमा मद्दत गर्छ ।काँक्रोमा ९६ प्रतिशत पानी मात्र हुने भएकोले यसमा भिटामिन ए, बी वान, बी सिक्स, […]
दैनिक जीवनमा मान्छेले सोचेभन्दा धेरै झुटो बोल्ने गर्छन् ।‘वुड आइ लाइ टु यु’ का लेखक पल सिगर मानिसले झुट बोल्नुपछाडि थुप्रै कारणहरू रहेको बताउँछन् । विशेषगरी व्यक्तिगत स्वार्थ, सजायबाट पन्छिन, छल गर्न, पुरस्कार तथा कामको स्याबासी पाउनका लागि मानिसहरूले झुट बोलिरहेका हुन्छन् । हरेक समय साँचो बोल्दा समाजमा धेरै समय टिक्न नसक्ने कारणले कसैको भावनालाई […]
गर्मीको मौसममा रातो अंगुरले धेरैलाई आकर्षित गर्दछ । रातो अंगुर हेर्दा जति आकर्षक देखिन्छ, खाँदा उत्ति नै स्वादिलो पनि हुन्छ । यसको अमिलो तथा गुलियो स्वादकै कारण गर्मीमा सेवन गरिने विभिन्न जुसमा समेत यसको प्रयोग गरिन्छ । डाइटिसियनहरूका अनुसार रातो अंगुरमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिनका साथै एन्टी अक्सिडेन्ट तत्व पाइन्छ । यसको सेवनले शरीरमा आवश्यक मात्रामा […]
शरीर तथा कपडाबाट आउने दुर्गन्ध कम गर्न अथवा बास्नादार बन्न अनि व्यक्तित्वलाई निखारता प्रदान गर्न परफ्युमको प्रयोग गरिन्छ । प्रायः हामी परफ्युमको प्रयोग नाडी, कान, गला जस्ता शरीरका अंगमा गर्छौ । किनकी यी अंंगहरुमा लगाएको परफ्युम धेरैबेर टिकाउ हुने र बास्ना पनि आउने हुन्छ ।परफ्युम शरीरको अंगमा लगाउनु सही हो त ? परफ्युमको प्रयोग शरीरको […]
तपाई हामी सबैले तिते करेलालाई तरकारीको रुपमा सेवन गर्दै आएका छौ । तिते करेला मौसमी वेमौसमी दुवै खालको हुन्छ । हामीले दिनहुँ तरकारीको सेवन गर्दा करेला मात्रै नभएर अन्य विभिन्न तरकारीहरु प्रयोग गर्दै आएका हुन्छौ । तर तपाई हामी सबैलाई थाहा नहुन सक्छ की हामीले सेवन गर्दै आएका तरकारीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई कत्तिको फाइदा गर्छ या […]
मानिसको जीवनमा उतारचढाव त भई नै रहन्छ । प्राय: मानिसको इच्छा र आकांक्षा असीमित हुन्छ तर प्राप्ति भने कम नै हुने गर्छ । नीति शास्त्रमा लेखिएको छ यस्ता काम कहिले पनि अधुरो छोड्नु हुँदैन, नत्र जिवनभरी पछुताउनु पर्छ । जीवनमा सुखी रहन यी ४ काम कहिल्यै पनि अधुरो छोड्नु हुदैन । शत्रुता – जीवनमा कसैसँग […]
समाजमा एउटा भनाई छ, घरभित्र मनिप्लान्ट लगाइयो भने पैसा कमाई हुन्छ । अर्थात जति-जति मनिप्लान्ट हुर्कन्छ, फैलन्छ, उत्तिनै घरममा समृद्धि भित्रिन्छ भन्ने मान्यता छ । मनिप्लान्ट, खासमा एक लहरे वनस्पति हो । यो इनडोर अर्थात घरभित्रै रोप्न मिल्ने प्रजातिको विरुवा हो । मनीप्लान्ट पानी वा माटो दुबैमा रोप्न सकिन्छ । इनडोर प्लान्टको रुपमा लगाउँदा यसले […]
श्रीमान श्रीमती भनेको एक रथका दुइ पांग्रा हुन् भनिन्छ । जीवनमा यी दुईको वीचमा मेल हुनु एकदम आवश्यक हुन्छ । सुमधुर सम्बन्धले मात्र जीवन सहज हुने गर्दछ । वैवाहिक सम्बन्धमा सानोतिनो झगडा वा मनमुटाव हुनु स्वाभाविक हो । अहिलेको भागदौड र व्यस्तताको कारणले गर्दा एकअर्कालाई समय दिनु गाह्रो हुँदा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा दरार आउने गर्छ […]
घरमा तपाई कुन दिशातिर सिरान लगाएर सुत्नुहुन्छ ? मानिसको सुताई उसको स्वाथ्यसंग सम्वन्धित हुन्छ । एकदम ख्याल राख्नुहोस कुन दिशा सिरान लगाएर सुत्नु सही हुन्छ भनेर । हामी जव दिनभरी काम गरेर थाक्छौं । शरीरको उर्जा कम हुन्छ । शरीरमा उर्जा कम भएपछि आराम जरुरी हुन्छ । शरीरको आरामको लागि सुत्नु अत्यावश्यक छ । तर […]
तपाई हामि सबैलाई सताउने कारण मध्ये एउटा हो कमाइ। जति कमाइले सताइरहेको छ त्योभन्दा बढि बचाउन नसकेर समस्यामा परेका हुन्छौ। त्यसैले पनि मानिसहरुले भन्ने गरेको सुनिन्छ, ‘मेरो हातमा त पैसा नै टिक्दैन के गर्ने ?’ यदि तपाई पनि पैसा बचाउन नसकेर हैरान हुनुहुन्छ भने यस्तो उपाय हरु प्रयोग गर्नुहोस। खर्चलाई टिप्ने बानी बसालौं – तपाईले […]
जमिनको कारोबार गर्दा त्यसको क्षेत्रफल मापन अनिवार्य हुन्छ । वर्गफिट वा वर्गमिटर जग्गा मापनको सर्वमान्य इकाई हो । तर स्थानपिच्छे जमिनको क्षेत्रफल नाप्ने तरिका वा इकाई फरक हुन सक्छ । नेपालमा प्रायः जग्गाको क्षेत्रफल तराईमा एउटा र पहाडी भेगमा अर्को मानक इकाईमा नाप्ने गरिन्छ । तराईमा क्रमशः कुनुवा, धुर, कठ्ठा र बिघामा जग्गा नापिन्छ । […]
एजेन्सी – कागती स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी फल हो । स्वास्थ्यमा यसले पार्ने फाइदा र विशेष खालको स्वादका कारण कागती विभिन्न प्रकारका भोजनमा प्रयोग गरिन्छ । यसले तौल नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर क्यान्सर लाग्न नदिनेसम्मका काम गर्छ । खासगरी कागती मेक्सिको, भियतनाम र थाइल्याण्डमा लोकप्रिय छ। मानिसलाई दैनिक चाहिने भिटामिन सीको ३२ प्रतिशत कागतीबाट प्राप्त गर्न […]
कपालमा चायाँ पर्ने हामिमध्ये धेरैलाई देखिने समस्या हो जुन बच्चादेखि युवा, बृद्ध सबैमा देखापर्ने गर्दछ । सरसफाइ पनि चायाँको कारक हो । कपालको सरसफाइमा ध्यान नदिने मानिसमा चायाँ पर्ने सम्भावना बडी हुन्छ । मानिसको सुन्दरता झल्काउन कपालले महत्वपुर्ण भुमिका राख्दछ । मानिसको कपालमा जाडो र गर्मी दुबै मौसममा चाया पर्ने गर्दछ । कपालमा चाया पर्ने समस्याका […]